Faroole “Hadii Xasan Sheekh laga guuleysto waa inuu xilka banneeyaa” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faroole “Hadii Xasan Sheekh laga guuleysto waa inuu xilka banneeyaa” (DHAGEYSO)
C/raxmaan Faroole oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe kahor inta uusan dhoofin ayaa sheegay inuu weli yahay musharax u taagan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
C/raxmaan Faroole oo hore si weyn u diidanaa inuu Xasan Sheekh soo laabto ayaa tilmaamay in loo baahan yahay ninkii xilkaasi kusoo baxa lala shaqeeyo.
“Soomaaliya waxaa u rajeynayaa cid kastaba oo la doorto in lala shaqeeyo, hadii Xasan Sheekh laga guuleysto waa inuu xilka banneeyaa, sidii aan aniguba sameeyay oo kale, hadii uu soo laabtana waa in lala shaqeeyaa” Sidaasi waxaa yiri C/raxmaan Faroole.
“Dadka ganacsatada ee Muqdisho ku sugan waxaan ugu baaqayaa inay u gurmadaan walaalahooda ay abaaruhu ku dhufteen ee ku sugan deegaanada Puntland, Muqdisho lacag badan baa taalla, waxaa loo baahan yahay in lacagahaasi wax laga gaarsiiyo dadka dhibaateysan” Ayuu hadalkiisa raaciyay C/raxmaan Faroole.
Ugu dambeyntii, C/raxmaan Faroole ayaa sheegay inuu haatan ku wajahan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, balse uu marka hore ka qeyb gali doonno doorashada guddoonka dib ugu soo laaban doonno magaalada Muqdisho isagoo ka qeyb gali doonna doorashada Soomaaliya.